Proton: ko Windows vhidhiyo mutambo uchashanda zvakanaka paLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Proton: ko Windows vhidhiyo mutambo uchashanda zvakanaka paLinux?
Kune zvakawanda uye zvakawanda yemuno mavhidhiyo emitambo yeiyo GNU / Linux chikuva, uye nemitambo yemavhidhiyo yemhando yepamusoro iri kuwedzera. Asi iwe haungorarame pamitambo yakagadzirirwa iyi chikuva kana iyo inotakuriswa. Dzimwe nguva ungangoda kushandisa Windows-chete vhidhiyo mutambo paLinux, uye panguva iyoyo Proton ndiko kuponeswa kwako.
Mamwe mazita akanaka anowanikwa chete paWindows, senge rakabudirira GTA, uye mamwe akawanda. Kana iwe uchida kutamba iyi yemavhidhiyo mitambo pane yako yaunofarira distro, iwe une mukana wakanaka kushandisa Valve's Steam mutengi. Uyu mutengi we online online vhidhiyo chitoro ndeye natively yeLinux, asi inosanganisa chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo zvinotarisirwa nevazhinji vatambi. Ndiyo Proton ...
Ini ndato taura muLxA kakawanda nezve iyo Steam mutengi pachayo, ichipa yakawanda data, pamwe neiyo Proton chirongwa. Asi nhasi zvandiri kuda kuratidza chinhu chakapusa uye chiri nyore, asi izvo zvinogona kuenda zvisingaonekwe nevakawanda. Uye zvinotevera ...
Iwe unoda kutamba mutambo wevhidhiyo uyo unongowanikwa chete yeWindows? Kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako neWine, Tamba PaLinux, nezvimwe, uye iwe unoshandisa Steam + Proton, iwe unofanirwa kuziva chimwe chinhu. Uye ndizvokuti mutambo wevhidhiyo unoshanda sei paLinux? Mhinduro yacho haisi nyore, yega yemitambo yemavhidhiyo inogona kuita imwe kana imwe maitiro, mamwe anoshanda sedumwa, mamwe anogona kuburitsa imwe mhando yedambudziko diki, uye vamwe vanozove nezvikanganiso zvakakura.
Tsvaga chinzvimbo muProtonDB
Uye apa ndipo pandinoenda. ¿Nzira yekuziva pamberi? Zvakanaka, unogona kutevedzera anotevera matanho:
Enda ku ProtonDB, one database neruzivo nezve yakatsigirwa vhidhiyo mitambo.
Kumusoro uko iye ari kutsvaga «Tsvaga mitambo ...», iwe unogona kunyora zita remutambo waunoda kuziva kana uchinge wakanaka, wakashata kana wakanaka.
Iye zvino ichatsvaga iyo dhatabhesi uye kana ichiwanikwa yeProton pane Steam, uchaita icharatidza ruzivo nezvake.
Dzvanya pamutambo izvo zvinoonekwa, kana akati wandei achionekwa nekutsvaga kwako.
Unogona ona chimiro ruzivo Goridhe, Sirivheri, Bronze. Zvakanaka, asi chinhu chimwe nechimwe chinorevei?
Yaputswa (tsvuku): isingashande zvachose.
Bronze (orenji): inoshanda zvisirizvo.
Sirivheri (pfumbu): inoshanda zvakajairika.
Ndarama (goridhe) - inoshanda nemazvo, inogona kungopa mashoma mashoma madiki.
Native (girini): 100% inoshanda.
Zvakare, une rese Forum nevashandisi vakambozviedza uye nemaonero avo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Proton: ko Windows vhidhiyo mutambo uchashanda zvakanaka paLinux?
Pakati peGoridhe neNative Platinum. Haisi yemuno ku linux asi inoshanda 100%
Pindura kuna dani
Yemahara software yedambudziko. Mazuva redhiyo uye emergency
Nyore DirectMedia Layer 2.0.12 inouya nerutsigiro rweakasiyana mutambo vatongi uye nezvimwe